ISIKHUMBUZO SOKUZALWA SIKARAJIV GANDHI: IICATSHULWA ZOOVULINDLELA EZILI-10 ZE-NKULUMBUSO YANGAPHAMBILI - PAMPEREDPEOPLENY.COM - I-INSYNC
USadbhavana Diwas 2019: Izicatshulwa zoovulindlela zikaRajiv Gandhi kwisikhumbuzo sakhe sama-75 sokuzalwa
Imidlalo UMedvedev ukhupha iMont Carlo Masters emva kovavanyo oluqinisekileyo lwe-coronavirus
Ekhaya I-Insync Ubomi Ubomi oi-Neha Ghosh Ngu UNeha Ghosh Nge-20 ka-Agasti ka-2019
Uzalelwe nge-20 ka-Agasti 1944, u-Rajiv Gandhi usebenze njenge-Nkulumbuso yase-India ukusukela ngo-1984 ukuya ku-1989.
Namhlanje kwisikhumbuzo seminyaka yokuzalwa engama-75, iNkulumbuso uNarendra Modi unike imbeko kulowo wayesakuba yi-Nkulumbuso uRajiv Gandhi. Uye wathumela umyalezo kuTwitter esithi, 'Siyamhlonela umphathi wethu wangaphambili uShri Rajiv Gandhi ngomhla wokuzalwa kwakhe'.
indlela yokukhusela iinwele kumanzi anzima
Nge-21 kaMeyi ka-1991, uRajiv Gandhi wabulawa kwintlanganiso kawonke-wonke ngelixa wayekhankasela kwi-Sriperumbudur yaseTamil Nadu yomgqatswa weLok Sabha.
ICongress ibheka olu suku njengoSadbhavna Divas. Namhlanje, ngomhla wokuzalwa kukaRajiv Gandhi, nazi ezinye zezicatshulwa zalowo wayesakuba yi-Nkulumbuso.
Uphuhliso alukho kwimizi-mveliso, amadama kunye neendlela. Uphuhliso lumalunga nabantu. Injongo yezinto eziphathekayo, inkcubeko kunye nokuzaliseka kwabantu. Into yomntu ibaluleke kakhulu ekukhuleni. '
'Abafazi sisazela selizwe. Bayibamba indibano yethu. '
'Imfundo kufuneka ibe sisilinganisi esikhulu kuluntu lwethu. Kufuneka ibe sisixhobo sokulinganisa umahluko owenziwe ziinkqubo zethu zentlalo ezahlukeneyo kumawaka eminyaka adlulileyo. '
Wonke umntu kufuneka athathe isifundo kwimbali. Kuya kufuneka siqonde ukuba naphi na apho bekukho imilo yangaphakathi kunye neengxabano elizweni, ilizwe liye labuthathaka. Ngenxa yoku, ingozi evela ngaphandle iyanda. Ilizwe kufuneka lihlawule ixabiso elikhulu ngenxa yolu hlobo lobuthathaka. '
'Kangangeentsuku, abantu babecinga ukuba i-India iyashukuma. Kodwa kusoloko kukho iinyikima xa umthi omkhulu uwe. '
'Ukuba amafama aba buthathaka ilizwe liphulukana nokuzithemba kodwa ukuba bomelele, inkululeko iyomelela. Ukuba asiyigcini inkqubela yethu kwezolimo, indlala ayinakupheliswa eIndiya. Kodwa eyona nkqubo yethu yokuphelisa intlupheko kukuphucula umgangatho wokuphila kwamafama ethu. Eyona nto iphambili kwiinkqubo zethu zokuphelisa intlupheko kukukhuthaza amafama. '
'Abanqolobi baxakekile ngaphakathi nangaphandle kwelizwe kwezi zinto zinobungozi kubumbano nakwintembeko yelizwe.'
'Xa umthi omkhulu uwe, umhlaba uyashukuma.'
'Umsebenzi wethu namhlanje kukuzisa i-India embundwini wenkulungwane yamashumi amabini ananye, ikhululeke kumthwalo wendlala, ilifa lekoloniyalizim elidlulileyo, kwaye iyakwazi ukuhlangabezana neminqweno yabantu bethu.'
'Kufuneka sibone ukuba ukungalingani kwengingqi ekukhuleni kwamaqela ohlukeneyo elizwe kuyasuswa kwaye onke amazwe aqhubela phambili ngokulinganayo. Siza kuqinisekisa ukuba bonke abemi belizwe bafumana ithuba elipheleleyo lokufaka isandla kwi-India.
Ipakethe yobuso eyenziwe yasekhaya yesikhumba esikhanyayo
Izibonelelo zokufunda ushiv tandav stotra
Izibonelelo zeoyile yejojoba yeenwele
Unyango lwasekhaya lweenwele ezicocekileyo
enkosi abancedisi be-coronavirus google doodle